iPhone 11 - iPhone News | IPhone News (Pejy 2)
Fanambarana vaovao momba ny maody alina an'ny iPhone 11
Ity no fanambarana Apple vaovao izay ahitantsika ny lanjany sy ny tombony omen'ny maody Night amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny iPhone 11
Apple dia nitarika ny varotra finday avo lenta tamin'ny telovolana farany tamin'ny 2019
Andro vitsy lasa izay, Apple dia nanambara ny valim-bola mifandraika amin'ny telovolana farany tamin'ny taona 2019, telovolana ara-bola voalohany 2020 ho an'ny ...
Toa tsy mifanaraka amin'ny CarPlay amin'ny BMW sasany ny IPhone 11 Pro
Ny iPhone 11 Pro dia toa tsy mifanaraka amin'ny CarPlay misy amin'ny BMW Mini sy ny 1 Series avy amina mpanamboatra iray ihany.
Ny fangatahana avo lenta amin'ny iPhone 11 dia manery an'i Apple hampitombo ny fanamboarana ny processeur A13
Mitombo hatrany ny fangatahana ny iPhone 11, manery an'i Apple hanamafy ny fanamboarana ny processeur A13 ao aminy
Ny FBI dia nanokatra iPhone 11 Pro niaraka tamin'i GrayKey hanadihady ny raharaha Pensacola
Tany Etazonia nandritra ny famotopotorana ny fitifirana tao Pensacola, tokony namoha iPhone 11 Pro niaraka tamin'ny GrayKey ny FBI.
Ireo no "Shot amin'ny iPhone 11 Pro" vaovao roa avy amin'i Apple
Spectacular ny fohy fohy an'ny Shot amin'ny iPhone amin'ity tranga ity miaraka amin'ny 11 Pro ho mpiorina voalohany amin'ny tantaran'ny reny mpamily taxi.
Apple mitady sary tsara. Hanome valisoa ny 5 voalohany
Apple mitady sary tsara. Hanome valisoa ny top 5 izy io. Ny hany fepetra takiana dia ny alain'ny iray amin'ireo maodely iPhone 11 telo amin'ny maody alina izy ireo.
Apple dia namoaka horonantsary vaovao amin'ny andiany "Shot on iPhone Experiment"
Apple dia namoaka horonantsary vaovao tao amin'ny andiany "Shot on iPhone Experiment". Ity fizarana fahefatra ity dia horonantsary manontolo amin'ny iPhone 11 Pro.
Slofies no kintan'ny toerana vaovao Apple iPhone 11
Apple dia mampiroborobo ny iPhone 11 vaovao manasongadina ireo faritra vaovao, ilay fiasa vaovao ahafahana manao selfie mihetsika miadana.
Ireo mpitaingina tany an'efitra saodiana, tifitra vaovao hafa nahagaga tamin'ny iPhone
Apple dia mampiseho sary vaovao voatifitra tanteraka miaraka amin'ny iPhone 11 Pro Max. Lahatsary feno vovoka, lasantsy ary tany efitra
«Snowbrawl» ny ady amin'ny lanezy voarakitra miaraka amin'ny iPhone 11 Pro
Apple dia nanampy tao amin'ny fantsony YouTube ny ady an-dàlam-panala baoty mitondra ny lohateny hoe "Snowbrawl" izay voarakitra anaty iPhone 11 Pro tanteraka
Apple dia miara-miasa amin'ny 100camera hanome iPhone 11 ho an'ny mpianatra any Chicago
Mampiroborobo ny iPhone 11 ry zalahy Cupertino amin'ny alàlan'ny fampitaovana ny sekolin'ny sary tsy mitady tombony amin'ny fitaovana ho an'ny mpianatra any Chicago.
DxOMark dia misafidy ny iPhone 11 Pro ho fakan-tsary tsara indrindra handraketana horonantsary eny an-tsena
Ny kalitaon'ny fandraisam-peo natolotry ny iPhone 11 Pro no tsara indrindra eny an-tsena, mifamatotra isa amin'ny Xiaomi Mi CC9 Pro
DxOMark dia mamela ny fakantsary iPhone 11 Pro amin'ny toerana fahatelo
DxOMark dia mandefa ny isa amin'ny fakantsary an'ny iPhone 11 Pro. Amin'ity tranga ity dia avelany amin'ny toerana fahatelo eo ambanin'ny Xiaomi sy Huawei
Toa ny fangatahana iPhone 11 dia lehibe kokoa noho ny an'ny 11 Pro Max
Ireo tarehimarika izay voatsinjara amin'ny varotra iPhone 11 vaovao dia nametraka ny maodely Pro Max ho fatiantoka amin'ny resaka varotra
Efa vonona amin'ny famoahana ny Smart Battery Case ho an'ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro
Aorian'ny fandefasana ny iOS 13.2, Apple dia efa vonona ny zava-drehetra amin'ny fandefasana ny Smart Battery Case ho an'ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro
Mampitahain'izy ireo ny sarin'ireo kintana nalaina tamin'ny Pixel 4 sy ny iPhone 11 Pro
Mampitahain'izy ireo sary kintana roa nalaina tamin'ny Pixel 4 sy iPhone 11 Pro, sary roa mitovy fa tsy mitovy amin'ny famirapiratany.
Fampitahana tsy mitombina amin'ny andro: iPhone 11 Pro vs Canon 1DX Mark II
Ny fividianana ny valin'ny fakana sary an'ny iPhone 11 Pro izay anoloran'ny Canon 1DX Mark II antsika nefa tsy jerena ny fomba fiasan'ny fitaovana tsirairay dia mampalahelo.
Ny iPhone 11 vaovao dia namela an'i Apple hitombo amin'ny ankamaroan'ny tsena afa-tsy Etazonia
Ny famoahana ny iPhone 11 dia namela ny orinasan-tserasera Cupertino hampiakatra ny tsena any amin'ny firenena eropeana maro, afa-tsy i Shina sy Etazonia.
Fitsapana fanoherana rano mahery vaika ho an'ny iPhone 11
Izy ireo dia manao fitsapana mihoapampana hijerena ny fahaizan'ny rano sy ny fanoherana lalina an'ireo maodely iPhone vaovao
Ny horonantsary vaovao 'Lose you to Love Me' avy amin'i Selena Gomez dia noraketina niaraka tamin'ny iPhone 11 Pro
Apple dia mandefa horonantsary Shot vaovao vaovao amin'ny alàlan'ny rakitsary misy ny hira vaovao an'i Selena Gomez izay noraketina tamin'ny iPhone 11 Pro.
Ny varotra IPhone 11 dia mihoatra ny nandrasan'ny Apple voalohany
Ny varotra IPhone 11 manerantany dia tsara kokoa noho ny nambaran'ny Apple mialoha ary ny mpamatsy dia mizatra amin'ny baiko vaovao
Ny iPhone 11 Pro Max dia mandresy ny Galaxy Note 10+ amin'ny androm-piainany
Ny fahaizan'ny batterie an'ny iPhone 11 Pro Max dia mamela ity maodely Apple vaovao ity hihoatra ny androm-piainan'ny Galaxy Note 10+.
Toy izao ny hazavan'ny vera farany amin'ny iPhone 11 rehefa mampirehitra ny jiro ianao
Ny mpampiasa sasany dia mampiseho ny vokatra tsara izay vokarin'ny vera namboarin'ny iPhone 11 rehefa mandrehitra ny tselatr'ilay fitaovana.
Ireo mpamatsy Apple dia mety hahita fitomboan'ny kaomandy noho ny fangatahana mafy ho an'ny iPhone 11
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny fivarotana ny iPhone 11 vaovao dia mety mihoatra ny antenaina rehetra ary Apple dia tokony hanome baiko bebe kokoa an'ireo mpamatsy azy.
Hafatra fampitandremana rehefa mampiasa efijery tsy am-boalohany amin'ny iPhone 11, iPhone 11 Pro ary iPhone 11 Pro Max
Apple dia mampiditra hafatra fampitandremana ao anaty toe-javatra raha misy amin'ireo maodelin'ny iPhone 11 manana efijery tsy voalohany
Ahoana ny fametrahana ny iPhone 11 vaovao ao amin'ny DFU, vonoy na amin'ny fomba fanarenana
Ampianarinay anao ny fametrahana ny maodely iPhone 11 vaovao ao amin'ny DFU, ny fomba fanarenana, ny fanidiana ary ny fiasa hafa
Ny batterie miendrika L, 4 GB RAM ary antsipiriany hafa momba ny iPhone 11 Pro Max
Ao amin'ny iFixit dia asehon'izy ireo anay ny atin'ny modely iPhone 11 Pro Max vaovao ary afaka jerenao ny bateria miendrika L sy ny antsipiriany mahaliana hafa
Toy izao no ahaizan'ny iPhone 11 vaovao mahazaka fianjerana [Video]
Ny vera an'ny modely iPhone 11 sy iPhone 11 Pro vaovao dia tena mafy tokoa araka ny hitanao amin'ireo horonan-tsary ireo izay nosedraina.
Famerenana IPhone 11 Pro Max: Apple manome antsika izay nangatahinay
Izahay dia mamakafaka ny iPhone 11 Pro Max, ilay telefaona Apple vaovao izay misongadina amin'ny fakantsary miavaka, fahaleovan-tena tena tsara ary endrika tsy manam-paharoa.
Ny iPhone 11 Pro vaovao dia manafina RAM 2 GB fanampiny ho an'ireo fakantsary vaovao
Ny fahatsiarovana RAM an'ny iPhone 11 Pro vaovao dia mety hahatratra hatramin'ny 6 GB noho ny fanampiny 2 GB izay afeniny fotsiny ny fitantanana ireo fakantsary.
Ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro dia mahavita mihoatra ny vinavinan'ny tahiry
Toa ny modely iPhone 11 sy iPhone 11 Pro vaovao no handresy ny vinavinan'ny mpandinika famandrihana voalohany.
Ny iPhone 11 rehetra dia nanamafy fa manana RAM 4GB sy bateria lehibe kokoa
Nandritra ireo herinandro nialoha ny fanombohana ny iPhone vaovao ho an'ity taona ity dia nisy ny tsaho nilaza fa ...
Ny fangatahana voalohany ho an'ny iPhone 11 dia mbola tsara kokoa noho ny nandrasana
Raha ny filazan'ny mpandalina Apple malaza, Ming-Chi Kuo, ny fivarotana ny iPhone vaovao dia raha tsara kokoa noho ny nandrasana.
Ny tahiry an'ny iPhone 11 vaovao dia mitazona ny fisarihana
Toa tsy tara loatra ny fandefasana entana amin'ity indray mitoraka ity ary mbola tsara ny tahirin'ny iPhone 11, iPhone 11 Pro ary iPhone 11 Pro Max.
Ny iPhone 11 Pro vaovao dia mety hanana RAM 6GB, mamela ny iPhone 11 amin'ny 4GB ihany, na dia misy aza ny tsaho milaza fa hanana 4GB daholo.
Nifidy ny fonony tsara indrindra ho an'ny iPhone 11, Pro sy Pro Max vaovao ianao, hiarovana azy ireo amin'ny tsiro tsara.
IPhone 11 Pro dia manana fifandraisana 4G LTE 13% haingana kokoa noho ny iPhone XS
Voamarina ny hafainganan'ny modem gigabit vaovao 4G LTE, ny iPhone 11 Pro dia 13% haingana kokoa noho ny iPhone XS teo aloha.
IPhone iza no hividy amin'ny fanombohana ny iPhone 11 vaovao
Miaraka amin'ny iPhone 11 vaovao, Apple dia manitatra ireo karazana safidy omeny antsika raha te hanavao ny iPhone isika.
Antony 25 hividianana iPhone 11 vaovao
Aorian'ny fandefasana ny iPhone vaovao, iza aminay no mividy? Izahay dia manome anao antony 25 hanapahana hevitra momba ilay iPhone 11 vaovao, maodely mora indrindra.
Izahay dia mitondra anao ny horonan-tsary izay tadiavin'ireo tovolahy avy ao Cupertino hanolotra ny iPhone 11 Pro vaovao, ny iPhone voalohany miaraka amin'ny anarana farany Pro sy ny fakantsary Pro telo.
Ny tatitra iray hafa dia manome antoka fa ny iPhone 11 dia hampiditra ny charger USB-C ao anaty boaty
Ny tatitra iray hafa dia manome antoka fa ny iPhone 11 dia hampiditra ny USB-C charger ao anaty boaty, charger haingana izay manolo ny 5W nentim-paharazana.
Ny iPhone 11 dia hampiasa fitaovana fananganana sy efijery mitovy amin'ny Galaxy Note 10
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa Apple dia hampiasa fitaovana fanamboarana sy efijery mitovy amin'ny Samsung avo lenta ho an'ny iPhone 11